Etu esi ede akwukwo ndi oma
Isi okwu na - abụkarị ihe ikpeazụ onye na - emepụta ọdịnaya na - ede, ha anaghị enweta ọgwụgwọ okike oge ụfọdụ. Agbanyeghị, mmejọ e mehiere mgbe isi akụkọ akụkọ na-egbu mgbe mgbe. Ọbụna mgbasa ozi ahịa kachasị mma ga-efu site na ajọ akụkọ. Usoro kachasị mma nke mgbasa ozi, usoro SEO, usoro ịre ahịa ọdịnaya, na mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ-kwa-otu nwere ike ikwe nkwa naanị otu ihe: Ha ga-etinye isi gị n'ihu ndị nwere ike ịgụ ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, ndị mmadụ ga-pịa ma ọ bụ ọ bụghị dabere na isi okwu n'onwe ya.
Ọtụtụ n'ime ndị edemede nwere ọgụgụ isi ga-etinye oge dị ukwuu n'ịdepụta isiokwu ka ha ga-ewepụta ọdịnaya n'onwe ya. A sị ka e kwuwe, olee otú ọdịnaya gị dịruru ná mkpa ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye lere anya wee gụọ ya? Ma ọ bụ ọ bụrụ na achọtaghị ya n'ime nsonaazụ ọchụchọ organic? Mepụta akụkọ gbara ọkpụrụkpụ bụ ma nka ma sayensị. Anyị edeela tupu oge maka ihe ndị na-eme ka ndị na-agụ pịa site na isi akụkọ ugboro ugboro site na ịgbakwunye
Anyị edeela na mbụ gbasara ihe ndị na-eme ka ndị na-agụ pịa site na isi akụkọ ugboro ugboro site na ịgbakwunye mmetụta uche na ịchọ ịmata ihe. N’ezie, anyị anaghị ekwu maka ya etịbe ma ọ bụ emeghị ihe n'eziokwu clickbait aha - anyi choro utu aha ndi na eme ka ndi na - aguta ihe ha ga - ekwu. Ghọgbu ndị mmadụ n'ime ịpị ga-ebibi ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na mgbalị ị na-azụ ahịa dijitalụ na-emecha merie. Karịsịa, aha nwere ike imetụta njiri onye na - agụ ya otu isiokwu:
Isi okwu na-agbanwe ụzọ ndị mmadụ na-agụ otu isiokwu na otu ha si echeta ya. Isi okwu na-agbakwunye ahụmahụ ndị ọzọ. Isi okwu nwere ike ịgwa gị ụdị edemede ị na-achọ ịgụ — akụkọ, echiche, nyocha, LOLcats — ọ na-edobekwa usoro maka ihe na-eso ya. Maria Konnikova, Onye New Yorker
Ihe omuma a site na CopyPress ga-enyere gị aka izere ụfọdụ n'ime titling njehie ọdịnaya marketers eme ọtụtụ mgbe. You'll ga-amụta ọtụtụ ụzọ dị mfe iji bulie isi okwu gị ma gbochie gị ihie ụzọ. Iji usoro “5 Ws na H” mee ka ị kwụsị ide ederede na-enweghị isi, nke na-enweghị isi, ebe usoro “Four U’s” na-egbochi isi akụkọ gị ịbụ ihe ụwa.
Aha ndị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ carbon nke ọrụ ndị ọrụ gị bụ ihe jọgburu onwe ya. N'ihi ya, akwụkwọ ozi a na-egosi na ị ga-eji obere okwu ma ọ bụ mee ụfọdụ nyocha ahịa iji nyere aka jide n'aka na isi okwu gị efughị ​​n'oké osimiri nke aha yiri ya. Jiri akwukwo ozi ndia dika ihe nlere iji jide n'aka na ị na-emeputa ihe kachasi nma nke di n’ime gi, guo ya ọcha akwụkwọ na-eke irè aha site na CopyPress maka ịmatakwu ihe gbasara isiokwu a.
Download Creatmepụta isiokwu dị mma & isi okwu
Mepụta Udiri Isi na Akwụkwọ Akụkọ Dị Irè
Tags: nlebara anyapịa nriclickbaitoyiriịmepụta isi okwu ndị dị irèna -emepụta aha di nmaịmepụta aha na isi okwu dị irèirè isiirè post ahautu aha di ireakụkọotúesi dee isiotú dee a post ahaesi dee ahanjikarịchabiputere ahautu ahaide ederedeIde ederede ahaide aha